Nharireyomurindi—Yekudzidza | May 1, 2005
SARUDZA MUTAURO Albanian Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Czech Danish Dutch Estonian Ewe Ga German Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Malagasy Malayalam Mizo Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Sranantongo Swahili Tatar Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese
“Musashamiswa neizvi, nokuti awa iri kuuya mairi avo vose vari mumakuva ekurangaridza vachanzwa inzwi rake vobuda.”—JOHANI 5:28, 29.
1. Kuzivisa kupi kusina kujairika kwakanzwika naMosesi pagwenzi raipfuta, uye ndiani akazodzokorora mashoko acho pava paya?
CHIMWE chinhu chisina kumbojairika chakaitika makore anodarika 3 500 apfuura. Mosesi akanga achitarisira makwai omukweguru Jetero. Pedyo neGomo reHorebhi, Mosesi akaona ngirozi yaJehovha iri murimi romoto raiva pakati pegwenzi romunzwa. “Akatarira, akaona gwenzi richipfuta nomwoto, asi rakanga risingatsvi,” inodaro nhoroondo iri muna Eksodho. Zvadaro akanzwa inzwi raimudaidza richibva mugwenzi racho. Inzwi racho rakati: “Ndini Mwari wababa vako, naMwari waAbraham[u], naMwari waIsaka, naMwari waJakobho.” (Eksodho 3:1-6) Pava paya, muzana remakore rokutanga C.E., mashoko iwayo akadzokororwa naJesu, Mwanakomana waMwari pachake.
2, 3. (a) Mubayiro wei wakamirirwa naAbrahamu, Isaka, uye Jakobho? (b) Mibvunzo ipi inomuka?
2 Jesu akanga ari kukurukurirana nevamwe vaSadhusi, vakanga vasingadaviri rumuko. Jesu akazivisa kuti: “Kunyange Mosesi akazivisa kuti vakafa vanomutswa, munhau yegwenzi reminzwa, paanodana Jehovha kuti ‘Mwari waAbrahamu naMwari waIsaka naMwari waJakobho.’ Iye ndiMwari, kwete wevakafa, asi wevapenyu, nokuti vose vapenyu kwaari.” (Ruka 20:27, 37, 38) Nokutaura mashoko aya, Jesu akasimbisa kuti mumaonero aMwari Abrahamu, Isaka, uye Jakobho vakafa kare kare vachiri kuyeukwa naMwari. Kufanana naJobho, vanomirira kuguma kwe“mazuva okutambudzika” kwavo, kurara kwavo murufu. (Jobho 14:14) Vachamutswa munyika itsva yaMwari.
3 Zvisinei, zvakadini nemabhiriyoni evamwe vakafa kubva pakatangira vanhu kurarama? Vachamutswawo here? Tisati tawana mhinduro inogutsa yomubvunzo iwoyo, ngationei kubva muShoko raMwari kuti vanhu vanoendepi pavanofa.
4. (a) Vanhu vanoendepi pavanofa? (b) Sheori chii?
4 Bhaibheri rinozivisa kuti vakafa “havana chavanoziva.” Pavanofa havatambudzwi mumoto wehero, havamiriri vachirwadziwa vari muLimbo, asi munhu anongodzokera kuguruva. Saka, Shoko raMwari rinobayira zanhi vapenyu kuti: “Zvose zvinowana ruoko rwako, kuti ruzviite, uzviite nesimba rako rose; nokuti hakuna basa, kana zano, kana zivo, kana uchenjeri paSheori kwaunoenda.” (Muparidzi 9:5, 10; Genesi 3:19) “Sheori” ishoko risingazivikanwi nevakawanda. Ishoko rechiHebheru risinganyatsozivikanwi kuti rakabva papi. Zvitendero zvakawanda zvinodzidzisa kuti vakafa vachiri vapenyu, asi sezvinoratidzwa neShoko raMwari rakafuridzirwa, vaya vari muSheori vakafa, hapana chavanoziva. Sheori iguva revanhu vose.
5, 6. Paakafa, Jakobho akaendepi, uye akavigwa panzvimbo imwe chete navanaani?
5 MuBhaibheri, tinotanga kuona shoko rokuti “Sheori” pana Genesi 37:35, NW. Zvichitevera kufa kwaJosefa mwanakomana wake waaida zvikuru, mukweguru Jakobho akaramba kunyaradzwa, achiti: “Ndichaburukira kuhwiro [Sheori, NW] kumwanakomana wangu, ndichichema”! Zvaaifunga kuti mwanakomana wake akanga afa, Jakobho aishuva kufa ova muSheori. Pava paya, vanakomana vapfumbamwe vakuru vaJakobho vaida kuenda nomwanakomana wake muduku pane vose, Bhenjamini, kuIjipiti kuti vatsvake zvokudya panguva yenzara. Zvisinei, Jakobho akaramba achiti: “Mwanakomana wangu haangaburuki nemi, nokuti mukoma wake wafa, iye wasiyiwa ari oga; kana akawirwa nenjodzi parwendo rwamunofamba, muchaburusira bvudzi rangu jena kuhwiro [Sheori, NW] nokuchema.” (Genesi 42:36, 38) Magwaro maviri aya anobatanidza Sheori norufu, kwete nohumwe upenyu pashure porufu.
6 Nhoroondo iri muna Genesi inoratidza kuti Josefa akanga ava mutarisiri wezvokudya muIjipiti. Pakupedzisira, Jakobho akakwanisa kuenda ikoko kuti anoonana zvekare naJosefa nomufaro. Pashure paizvozvo, Jakobho akagara munyika iyoyo kusvikira paakafa, akura zvikuru ava nemakore 147. Maererano nezvido zvake zvaakataura ava kufa, vanakomana vake vakatora mutumbi wake uye vakanouviga mubako reMakpera munyika yeKanani. (Genesi 47:28; 49:29-31; 50:12, 13) Saka, Jakobho akavigwa panzvimbo imwe chete naIsaka, baba vake, uye naAbrahamu, sekuru vake.
‘Vakasonganiswa Nemadzitateguru Avo’
7, 8. (a) Abrahamu akaendepi paakafa? Tsanangura. (b) Chii chinoratidza kuti vamwe vakaenda kuSheori pavakafa?
7 Pakutanga, Jehovha paakasimbisa sungano yake naAbrahamu uye apikira kuti mbeu yake yaizowanda, akaratidza zvaizoitika kuna Abrahamu. “Asi iwe” akadaro Jehovha, “uchaenda kune madzibaba ako norugare; uchavigwa wakwegura kwazvo.” (Genesi 15:15) Uye izvi ndizvo chaizvo zvakaitika. Genesi 25:8 inoti: “Abraham[u] akabudisa mweya wake, akafa akwegura kwazvo, ava mutana, makore ake ava mazhinji akasonganiswa nevanhu vake.” Vanhu ava vaiva vanaani? Genesi 11:10-26 inoronga madzitateguru ake kusvikira kumwanakomana waNoa ainzi Shemi. Saka Abrahamu akasonganiswa nevamwe ava vaitova muSheori paakafa.
8 Mashoko okuti “akasonganiswa nevanhu vake” anowanikwa kakawanda muMagwaro echiHebheru. Saka, zvine musoro kugumisa kuti Ishmaeri mwanakomana waAbrahamu, uye Aroni mukoma waMosesi, vose vakaenda kuSheori pavakafa, uye vari ikoko vakamirira kumutswa. (Genesi 25:17; Numeri 20:23-29) Mosesi akaendawo kuSheori, kunyange zvazvo pasina aiziva kwaiva neguva rake. (Numeri 27:13; Dheuteronomio 34:5, 6) Saizvozvowo, Joshua, uyo akatsiva Mosesi somutungamiriri waIsraeri pamwe chete nechimwe chizvarwa chevanhu vakaendawo kuSheori pavakafa.—Vatongi 2:8-10.
9. (a) Bhaibheri rinoratidza sei kuti shoko rechiHebheru rokuti “Sheori” uye shoko rechiGiriki rokuti “Hadhesi” anotaura nezvenzvimbo yakafanana? (b) Itariro yei ine vaya vari muSheori, kana kuti muHadhesi?
9 Kwapera mazana emakore, Dhavhidhi akava mambo wendudzi 12 dzaIsraeri. Paakafa, ‘akarara nemadzitateguru ake.’ (1 Madzimambo 2:10) Naiyewo aiva muSheori here? Zvinoshamisa kuti pazuva rePendekosti ya33 C.E., muapostora Petro akataura nezvokufa kwaDhavhidhi achibva atora mashoko ePisarema 16:10, anoti: “Hamungasiyi mweya wangu muSheori.” Ataura kuti Dhavhidhi akanga achiri muguva rake, Petro akashandisira mashoko acho kuna Jesu uye akaratidza kuti Dhavhidhi “akafanoona akataura pamusoro porumuko rwaKristu, kuti haana kusiyiwa muHadhesi uyewo nyama yake haina kuona kuora. Uyu Jesu akamutswa naMwari, uye isu tose tiri zvapupu zvechinhu ichi.” (Mabasa 2:29-32) Pano Petro akashandisa shoko rokuti “Hadhesi,” shoko rechiGiriki rinoreva zvakafanana neshoko rechiHebheru rokuti “Sheori.” Saka, vaya vanonzi vari muHadhesi vari mumamiriro ezvinhu akafanana neevaya vanonzi vari muSheori. Vakarara, vachimirira kumutswa.
MuSheori Mune Vanhu Vasina Kururama Here?
10, 11. Nei tingati vamwe vasina kururama vanoenda kuSheori kana kuti kuHadhesi pavanofa?
10 Mosesi atungamirira rudzi rwaIsraeri kubva muIjipiti, vamwe vanhu vakapanduka pavakanga vava murenje. Mosesi akaudza vanhu kuti vazviparadzanise nevatungamiriri vevapanduki vacho—Kora, Dhatani, uye Abhirami. Vaizofa zvinorwadza. Mosesi akatsanangura kuti: “Kana varume ava vakafa savamwe vanhu vose, kana zvimwe vakasvikirwa nezvinosvikira vamwe vanhu vose, Jehovha haana kundituma. Asi kana Jehovha akasika chinhu chitsva, nyika ikashamisa muromo wayo, ikavamedza, ivo nezvose zvavo, vakaburukira muhwiro vari vapenyu, ipapo muchaziva kuti varume ava vakazvidza Jehovha.” (Numeri 16:29, 30) Saka pasinei nokuti vakaita zvokumedzwa nepasi kana kuti kupedzwa nomoto sezvakaitwa Kora nevamwe vaRevhi 250 vaimutsigira, vapanduki vose ava vakapedzisira vava muSheori, kana kuti Hadhesi.—Numeri 26:10.
11 Shimei, uyo akanga atuka Mambo Dhavhidhi, akazorangwa naSoromoni, uyo akatsiva Dhavhidhi. “Usamurega ave somunhu asina mhosva,” Dhavhidhi akarayira kudaro, “nokuti iwe uri munhu akachenjera; uchaziva hako zvaunofanira kumuitira, unofanira kuburusira musoro wake wachena muhwiro neropa.” Soromoni akarayira kuti Bhenaya amuuraye. (1 Madzimambo 2:8, 9, 44-46) Mumwezve akaurayiwa nebakatwa raBhenaya ndiJoabhi, aimbova mutungamiriri weuto raIsraeri. Musoro wake wakanga wachena hauna “kuburukira muhwiro norugare.” (1 Madzimambo 2:5, 6, 28-34) Mienzaniso yose iyi inotsigira kuti mashoko orwiyo rwaDhavhidhi rwakafuridzirwa ndeechokwadi, anoti: “Wakaipa uchadzokera kuSheori, ivo vahedheni vose, vakakanganwa Mwari.”—Pisarema 9:17.
12. Ahitoferi aiva ani, uye akaendepi paakafa?
12 Ahitoferi aiva chipangamazano waDhavhidhi. Zano rake raikosheswa sokuti raibva kuna Jehovha pachake. (2 Samueri 16:23) Zvinosuruvarisa kuti mushumiri aivimbwa naye uyu akazopanduka uye akabatana nevapanduki vaitungamirirwa naAbhisaromi mwanakomana waDhavhidhi. Zviri pachena kuti Dhavhidhi aitaura nezvokupanduka uku paakanyora kuti: “Wakanga asi muvengi wakandishoora; ipapo ndaigona kutsunga; wakanga asi iye waindivenga wakazvikudza kwandiri; ipapo ndaimuvanda.” Dhavhidhi akaenderera mberi achiti: “Rufu ngaruvawire kamwe-kamwe, ngavaburukire kuSheori vari vapenyu; nokuti kushata kuri paugaro hwavo, imo mukati mavo.” (Pisarema 55:12-15) Pavakafa, Ahitoferi neshamwari dzake vakaenda kuSheori.
Ndivanaani Vari muGehena?
13. Nei Judhasi achinzi “mwanakomana wokuparadzwa”?
13 Enzanisa mamiriro ezvinhu aDhavhidhi nezvakaitika kuna Dhavhidhi mukuru, Jesu. Judhasi Isikariyoti, mumwe wevaapostora 12 vaJesu, akapanduka sezvakaita Ahitoferi. Chiito chaJudhasi chounyengeri chakanga chakakomba zvikuru kudarika zvakaitwa naAhitoferi. Judhasi akapandukira Mwanakomana akaberekwa ari mumwe oga waMwari. Paainyengetera kumagumo kwoushumiri hwake hwepasi pano, Mwanakomana waMwari akati nezvevateveri vake: “Pandaiva navo ndaisivatarisira nemhaka yezita renyu ramakandipa; uye ndakavachengeta, uye hapana kana mumwe chete wavo akaparadzwa kunze kwomwanakomana wokuparadzwa kuti rugwaro ruzadzike.” (Johani 17:12) Nokutaura nezvaJudhasi so“mwanakomana wokuparadzwa,” Jesu akaratidza kuti Judhasi paakafa, pakanga pasina tariro yokuti achamutswa. Haana kuramba achiyeukwa naMwari. Haana kuenda kuSheori, asi kuGehena. Gehena chii?
14. Gehena rinomiririrei?
14 Jesu akashora vatungamiriri vechitendero vomuzuva rake nokuti vaiita kuti mumwe nomumwe wevadzidzi vavo ave “munhu weGehena.” (Mateu 23:15) Kare ikako, vanhu vakanga vakajairana noMupata waHinomu, imwe nzvimbo yairasirwa marara uye yaiiswa zvitunha zvematsotsi ainzi akanga asina kukodzera kuti avigwe zvakanaka. Jesu akanga ambotaura nezveGehena muMharidzo yake yepaGomo. (Mateu 5:29, 30) Zvaraimiririra zvakanga zviri pachena kuvateereri vake. Gehena raimiririra kuparadzwa zvachose pasina tariro yorumuko. Kunze kwaJudhasi Isikariyoti womuzuva raJesu, pane vamwe vakaendawo kuGehena here, panzvimbo pokuenda kuSheori kana kuti Hadhesi, pavakafa?
15, 16. Ndivanaani vakaenda kuGehena pavakafa, uye nei vakaenda ikoko?
15 Vanhu vokutanga, Adhamu naEvha, vakasikwa vakakwana. Vakaita chivi nemaune. Vaifanira kusarudza upenyu husingaperi kana kuti rufu. Havana kuteerera Mwari uye vakatsigira Satani. Pavakafa, vakanga vasina tarisiro yokubatsirwa nechibayiro chorudzikinuro chaKristu. Asi, vakaenda kuGehena.
16 Kaini, mwanakomana waAdhamu wedangwe, akaponda munun’una wake Abheri uye kubvira ipapo akangodzungaira nenyika. Muapostora Johani akarondedzera Kaini somumwe “akabva kune wakaipa.” (1 Johani 3:12) Zvine musoro kutaura kuti kufanana nevabereki vake, akaenda kuGehena paakafa. (Mateu 23:33, 35) Izvi zvakanyatsosiyana chaizvo nezvakaitika kuna Abheri akarurama! “Nokutenda Abheri akapa Mwari chibayiro chaikosha kupfuura chaKaini, kunove kutenda kwaakapupurirwa nakwo kuti akanga akarurama, Mwari achipupurira pamusoro pezvipo zvake; uye nakwo, kunyange akafa, achiri kutaura.” (VaHebheru 11:4) Chokwadi, iye zvino Abheri ari muSheori maari kumirira kumuka.
Kumuka “Kwokutanga” uye “Kuri Nani”
17. (a) ‘Munguva ino yokupedzisira,’ ndivanaani vanoenda kuSheori? (b) Vaya vari muSheori uye vaya vari muGehena vanotarisirei?
17 Vakawanda vanoverenga izvi vachanetseka nezvemamiriro ezvinhu evaya vanofa ‘munguva ino yokupedzisira.’ (Dhanieri 8:19) Chitsauko 6 chaZvakazarurwa chinorondedzera nezvevatasvi vemabhiza vana panguva iyoyo. Zvinoshamisa kuti zita romutasvi wokupedzisira wacho rinonzi Rufu, uye anoteverwa neHadhesi. Saka, vakawanda vanofa vasingafungiri zvichikonzerwa nezviitiko uye mamiriro ezvinhu anomiririrwa nomutasvi webhiza wacho vanoguma vava muHadhesi, vachimirira kumutswa munyika itsva yaMwari. (Zvakazarurwa 6:8) Saka, vari muSheori (Hadhesi) vanotarisirei uye vaya vari muGehena vanotarisireiwo? Vaya vari muSheori vachamutswa; uye vaya vari muGehena vachaparadzwa zvachose—zvokusazovapozve.
18. Itariro yei inopiwa “pakumuka kwokutanga”?
18 Muapostora Johani akanyora kuti: “Munhu ane mugove pakumuka kwokutanga anofara uye mutsvene; rufu rwechipiri haruna simba pane ivava, asi vachava vapristi vaMwari nevaKristu, uye vachatonga naye samadzimambo kwemakore ane chiuru.” Vaya vachatonga pamwe chete naKristu vanomuka “pakumuka kwokutanga,” asi itariro yei iripo nokuda kwevamwe vanhu vose?—Zvakazarurwa 20:6.
19. Vamwe vanobatsirwa sei no“kumuka kuri nani”?
19 Kubvira pamazuva evashumiri vaMwari vanoti Eriya naErisha, chishamiso chokumuka chakaita kuti vanhu vararamezve. “Vakadzi vakagamuchira vakafa vavo vamutswa,” akarondedzera kudaro Pauro, “asi vamwe varume vakatambudzwa nokuti vakaramba kusunungurwa norumwe rudzikinuro, kuti vawane kumuka kuri nani.” Chokwadi, ava vakatendeka vakaramba vakavimbika vaitarisira kumuka kwaizoita kuti vararame, kwete makore mashomanana chete vozofa, asi tarisiro youpenyu husingaperi! Zvechokwadi ikoko kuchava “kumuka kuri nani.”—VaHebheru 11:35.
20. Nyaya inotevera ichaongorora chii?
20 Kana tikafa takatendeka Jehovha asati agumisa nyika ino, tine tariro chaiyo yo“kumuka kuri nani,” kuri nani mupfungwa yokuti kunoita kuti tive noupenyu husingaperi. Jesu akavimbisa kuti: “Musashamiswa neizvi, nokuti awa iri kuuya mairi avo vose vari mumakuva ekurangaridza vachanzwa inzwi rake vobuda.” (Johani 5:28, 29) Nyaya yedu inotevera inoongorora chimwe chinangwa chokumuka. Icharatidza kuti tariro yokumuka inotisimbisa sei kuti tirambe takavimbika uye kuti inotibatsira kukudziridza pfungwa yokuzvipira.
• Nei Jehovha achirondedzerwa saMwari “wevapenyu”?
• Vaya vari muSheori vari mumamiriro ezvinhu akadini?
• Vaya vari muGehena vane tarisiro yei?
• Vamwe vachabatsirwa sei no“kumuka kuri nani”?
Kufanana naAbrahamu, vaya vanoenda kuSheori vane tarisiro yokumuka
[Mifananidzo iri papeji 16]
Nei Adhamu naEvha, Kaini, uye Judhasi Isikariyoti vakaenda kuGehena?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndivanaani Vachamutswa?
Njodzi Inongoerekana Yaitika
Rumuko—Tarisiro Yakanaka Kwazvo
Rumuko—Dzidziso Ine Chokuita Newe
Tariro Yorumuko—Inorevei Kwauri?
Kunyange Zvazvo Ndisina Simba, Ndine Simba
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA May 1, 2005
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA May 1, 2005
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA May 1, 2005